Ngesikhathi zohwebo samanje kwemithi kukhona ezihlukahlukene izidakamizwa ezisetshenziswa ekwelapheni izinqubo ukuvuvukala esinyeni. Okuhlangenwe nakho futhi imiphumela izifundo eziningi zibonisa ukuthi 'furadonin "kungokwalabo yezindawo eziyinhloko phakathi imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu ekwelapheni lesi sifo edabukisayo.
Abaningi banesithakazelo impendulo yombuzo othi: " 'furadonin" - ama-antibiotic noma cha "? Le divayisi yezokwelapha kungokwalabo kwemithi izidakamizwa nitrofurans iqembu. Lokhu ejenti elwa namagciwane spectrum abazinikezele isetshenziswa ikakhulukazi ekwelapheni izifo ukuvuvukala kohlelo urinary, okuvela ngazo wayithukuthelisa bacterium nezinye ayingozi.
"Furadonin" e cystitis oyingozi futhi ezingalapheki
Umzimba Kulula kakhulu ukugaya lokhu izidakamizwa, ngakho-ke ngokushesha excreted ku umchamo. Ngo ukusetshenziswa ezingeni lokuhlushwa igazi ngempela kuyinto engasho lutho. Ngenxa solubility okuhle ezihlukahlukene zoketshezi "furadonin" unika umchamo umthunzi mnyama.
Kufanele kuphawulwe ukuthi umsebenzi umuthi namaphesenti isihlobo kwezinye izinhlobo zama-bacterium:
Ifomu mayelana nodaba izidakamizwa - amaphilisi ezincane yellow kokuba ukunambitheka ababayo. Ngaphezu kwalokho cystitis izidakamizwa lingasetshenziswa ekwelapheni izifo ezithathelwanayo ezibangelwa amagciwane of ngomgudu womchamo, ezinye zazo yilezi:
"Furadonin" livame ukusetshenziswa ukuvimbela ezihlukahlukene nezifo. Lokhu kungenxa yokuthi akubona bonke uyazi impendulo yombuzo "furadonin" - ama-antibiotic noma cha.
Uma sisetshenziswa "furadonin" ngesimo amaphilisi izinto ngomlomo asebenzayo ugxile ngokushesha ngaphakathi komgodi emathunjini 3-4 amahora. Ngemva kwalokho, nitrofurantoin, okuyinto imfuyo yayo asebenzayo iwela lymph kanye kuvimbela ukusabalala kwesifo. "Furadonin" Tablets (kusukela lapho wathola futhi njengoba uzobe kuchaziwe ngezansi) nethonya ngokuqondile enzyme lamaseli microbial ethwele engqamuzaneni hydrogen. Ngakho, kukhona ukubhujiswa izinqubo umzimba e amagciwane, okuyinto kuphakamisa futhi ukubhujiswa okuphelele kwalelizwe nezilwanyana ezincane pathogenic.
Lesi sidakamizwa Ngokungafani antibiotic nobuntu nomphumela letindzala phezu microflora. Effect Its ekhetha futhi kusebenza kuphela ngetinhlobo letibanti ezithile nezilwanyana ezincane.
imiphumela Local izitho zomzimba urinary eyeka hhayi kuphela nesanda pathogenic ezincane-eziphilayo, kodwa futhi kakhulu kwandisa amasosha omzimba jikelele. Ngakho-ke, ngesikhathi isicelo "furadonin" kuyaqedwa nezinye izinqubo ukuvuvukala emzimbeni womuntu. Lapho ekwelapheni cystitis, ezifana izidakamizwa has imiphumela ezuzisayo izitho zomzimba ezifana izinso, urethra futhi Amapayipi urinary.
Kepha "furadonin" izakhiwo ejwayelekile isinqandakuvunda, lwenza ukuphulukiswa amanxeba kanye nokwelashwa izilonda ku izitho zangaphakathi.
Ngokwezinga elithile, umuthi "furadonin" esiyingqayizivele. Analogue ohlobo yayo phezu isakhi esiyinhloko esebenzayo ulahlekile. Uma sikhuluma ine umphumela, kungenzeka ukuba esikhundleni izidakamizwa ezifana:
Ukuze ukuqhuba ukuphathwa ngezihloko ezihlukene izinqubo ezihlukahlukene ukuvuvukala, isicelo "Furatsilinom" ngokuvamile lokho kwanele. Lezi imithi futhi basonta iqembu antibiotic.
Abaningi abakwazi ukuthi yini okumelwe akhethe: "furadonin" noma "Furagin", engazi ukuthi cishe imithi efanayo. Kodwa njengoba 'Furagin "- kuyinto womkhiqizo wakuleli, wayevame umusa ekwelapheni cystitis. Cishe, lokhu kungenxa izindleko zalo iphansana.
Phakathi ukwelashwa "furadonin" kanye "furagin", akukho nokucindezela immunological Imininingwane ukumelana umzimba (lokhu kwenzeka ngezilapha magciwane). Kunalokho, nitrofurans kakhulu ukwandisa ezingeni amasosha omzimba. Lokhu kunengxenye ekwenzeni ukuthi ukwandisa imisebenzi phagocytic ka leukocyte emizimbeni.
Ukulungiselela "furadonin" kwandisa izici aphelele esibophezelayo ka serum-absorptive futhi adsorptive nomthamo res e isibindi ubende.
Iyasebenza, umuthi is hhayi kwakheka ukuze ukugoma, njengoba amagciwane Amagciwane zikwazi ukumelana naso cishe ukuze ketshezi asebenzayo. Lapho ukwelashwa iyadingeka ngaphansi izidakamizwa lokuhlushwa igazi, kuka ngokusebenzisa imithi elwa namagciwane.
Lo muthi ngokuvamile esetshenziselwa kabusha ukwelashwa kanye lokubuya kwesifo lokuvikela.
Ngaphezu kwalokho, kukhona esinye preimushestv elingenakuphikwa lokuthi has "furadonin" - intengo, ukubuyekezwa zazo zibonisa ukuthi izidakamizwa iyatholakala imikhakha ehlukahlukene sabantu. imibono eminingi ezithangamini ezehlukene wezokwelapha bathi ubuhlungu zinyamalale ekupheleni kosuku ngemva kokuthatha kuqala lo muthi. Ngaphezu kwalokho, izindleko isilinganiso kwemithi drugstores zezwe lethu ruble mayelana 110.
Imiphumela engemihle kubaphathi zomuthi
Uma wamukela into enjalo, abanye iziguli zizizwe ngokwanele okuvela engemihle imiphumela okungase esashiwo:
ukunciphisa noma ukulahleka ephelele ukudla;
Imiyalelo izidakamizwa samanje wezokwelapha (yokuchaza kuyini amaphilisi "furadonin", kusukela lapho wathola nendlela) kukhona isixwayiso. Libhekisela yokuthi uma kwenzeka noma yikuphi ukusabela ngenhla enqabayo kufanele kube ngokushesha ayeke ukuthatha imithi kudokotela.
Ukuze banciphise umthelela yemiphumela emibi, i-izidakamizwa kufanele kuthathwe ngezikhathi zokudla noma ngokushesha ngemva kokuba. Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa amanzi ngangokunokwenzeka.
"Furadonin" (ama-antibiotic noma cha, kunzima kakhulu ukunquma umuntu ovamile) ayikwazi ezithathwe kwabesifazane abakhulelwe noma lactating. Lokhu kungenxa yokuthi isithako esebenzayo kunomphumela anobuthi on ingane. Ngo umkhuba, umuthi akuyona iqondiswa kuphela phakathi namasonto okuqala angu-12 bekhulelwe, bese ingasetshenziswa kuphela ngaphansi kweso lwezokwelapha esiqinile. Umuthi is hhayi Kunconywa izingane, ogama yobudala kungazange kufinyelele 1 inyanga.
ezigulini esezikhulile kufanele usebenzise izidakamizwa ngokuqapha. Ngaphezu kwalokho, iziguli bahlanganyele engathandeki ukushayela imoto noma yimiphi eminye imisebenzi kuhlobane ngokuqondile emakamu eliphezulu. Lokhu kungenxa yokuthi i-izidakamizwa kubangela ukozela.
It is nhlobo ukuthatha noma yisiphi utshwala ekwelapheni "furadonin".
Kanye nezinye izidakamizwa preparty, "furadonin" enezinto eziningi Izimo. Lezi zihlanganisa:
oyingozi noma ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso, ukwephulwa imisebenzi yabo excretory;
ezingamahlalakhona inhliziyo ukwehluleka esiteji 2-3;
ukusha kwesibindi kohlobo ezingamahlalakhona;
ukuntula enzyme, dehydrogenase zikashukela-6-phosphate;
isici esiyingqayizivele nesineke izingxenye nokulungiselela.
Ukusebenzisana neminye imithi
Odokotela musa batusa ukuthatha "furadonin" (efana ke) ephelele nalabo izidakamizwa ukuthi ukunciphisa asidi umchamo. Lokhu kwabangela ukwehla okukhulu ukusebenza kwe nomuthi at pH ongaphakeme.
Futhi, awukwazi kanyekanye sebenzisa "furadonin" nge izidakamizwa ukuthi uvimbele uketshezi ijabulise. Ngenxa Kulezo zimo kunciphisa inani ingxenye esebenzayo umchamo. Lokhu kuholela yokuthi akukho nomphumela anti-virus.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla ebhaliwe, kunzima ukunikeza impendulo eziqondile umbuzo: "" furadonin "- ama-antibiotic noma cha" Kodwa njengoba libhekene laqanjwa ethile futhi ayibanzi-ugongolo umphumela, ke - izindlela eziphumelela ngokwengeziwe kuqhathaniswa ngemithi elwa namagciwane letindzala kokuba isinyathelo ezibanzi. Ukuze uthole umphumela yimpumelelo kubalulekile ukulandela iseluleko sikadokotela uhambe ngokuphelele yonke inkambo ukwelashwa.
Ukulungiselela "ngoba amafutha evutha ibhomu": isimangaliso noma lokukhohlisa?
Yini indlebe lehla izinja zisetshenziselwa abezindaba otitis nezinye izifo
Tights imfashini for girls
Clearthink: kanjani ukususa? imiyalo ephelele
Novosibirsk: Cathedral of the isimo leNkosi - Leli thempeli enhliziyweni eSiberia
Isici subjective zobugebengu emthethweni lobugebengu: umqondo, amafomu kanye izakhi